Laser Cutting Filter Cloth, Filtration Fabric Medium Laser Kucheka Solutions - Wuhan Golden Laser Co., Ltd
Laser nokuveza filters
Fast, namazvo uye otomatiki Laser nokuveza filtration jira anosvikirwa pamwe Golden Laser flatbed CO2 Laser okurwadzisa michina.
Filtration sezvo rinokosha nezvakatipoteredza uye kuchengeteka kudzora muitiro, kubva maindasitiri gasi-rakasimba Kuparadzana, gasi-mvura inonatsa, yakasimba-mvura inonatsa, yakasimba-chakasimba Kuparadzana, kuti mhepo kucheneswa uye mvura yokunatsa mune zuva mhuri midziyo yemagetsi, filtration yave kuramba zvikuru kureva nzvimbo vakawanda. Dzinenge mafomu akadai simba anosima, simbi zvigayo, esimende zvinomera uye dzimwe tsvina kubuda kurapwa, Whitehead Textile uye nguo maindasitiri mhepo filtration, tsvina kurapwa, kemikari indasitiri filtration crystallization, motokari indasitiri mhepo, mafuta filtration neimba mhepo kutonhodza, vacuum mhepo filtration, etc .
Panguva ino, Sefa zvinhu zviri kunyanya faibha zvinhu, machira dzakarukwa uye simbi zvokuvakisa, kunyanya faibha zvinhu zvinoshandiswa rinonyanya, kunyanya donje, shinda, wakaisvonaka nesirika viscose faibha, polypropylene, zvinhu zvenaironi, polyester, acrylic, nitrile nezvimwe chakaita zvokugadzirwa fibers , uyewo girazi faibha, zvedongo faibha, simbi faibha, etc.
Sezvo kushandisa munda filtration kuramba richikura, kuti mupise zvinhu zviri kuramba kuitwa yoku-. The filtration zvigadzirwa zvinobva dustproof jira, bhegi guruva, Sefa nechidzitiro, Sefa katuriji, Sefa emiti, Sefa donje kuchenesa core.
Laser kucheka Filter Cloth
Large nemanyorerwo CO2 Laser nokuveza muchina rakanakira kutema filtration anosvikirwa kunokwana asiri kuonana kwacho uye yakakwirira nemazvo kubudirira nokuda Laser danda. Uyewo, chafariz Laser kwacho chendangariro nokuveza micheto ndivo vanonzi chisimbiso apo achicheka rwokugadzira Textiles. Sezvo Laser chekawo Sefa jira haaiti fray, unozotevera kubudiswa kunova nyore.
Nokuveza-kumucheto Laser TECHNOLOGY FOR Zvakanyanya Kunaka Panguva Yepamuviri DZEONGORORO
Ndezvipi zvakanakira kutema Sefa jira Laser?
Laser nokuveza yazova kuitika nokuda firita indasitiri
Namazvo. High nemazvo uye rakarurama repeatability
Ichiita mabasa akawanda. Kucheka anenge zvose firita zvinhu
Zvakachena. Non-kuonana nokuveza uye asiri guruva
High kunzwisisa. Kucheka chero Zvekare zvimiro zvemhashu panguva imwe chete
Mumwe-danho. No vanofanira rework
Cost rutapudzo. No turusi vapfeke, zvishoma zvavakawana
Zvoga kugadzirwa kwacho pamwe conveyor uye dzokudya nehurongwa
Filter zvinhu zvinoda kuramba kwazvo maburi. Kunyanya Micro-mugomba kubudiswa, chetsika kubudiswa nzira zvakaoma kusangana yakasimbiswa zvinodiwa. The Laser anogona nezvibhakera makomba Sefa mashoko nokurondedzerwa siyana uye mapatani siyana.
Smooth akavezwa kumicheto. Automatic kuiswa chisimbiso akavezwa micheto - hapana fraying.
High nemazvo, kunyange yakanaka mashoko uye nharaunda isina yomukati contours.
No Whitehead Textile kusarurama - nokuda asiri dzefoni Laser kugadzira.
Mafomu mu firita indasitiri
• Guruva muunganidzwa mumasaga / Filtration wokudhinda jira / Industrial filtration mabhandi / Filter katuriji / Filter bepa / Mesh jira
• Air Filtration / Fluidization / Liquid filtration / micheka Technical
• Kuomesa / Guruva Filtration / Screening / Solid filtration
• Mvura filtration / Food filtration / Industrial filtration
• Mining filtration / Oil uye gasi filtration / Pulp nebepa filtration
• Textile mhepo kupararira zvinogadzirwa
Chii Chikumbiro rako?
Filter zvinhu akakodzera Laser nokuveza
Filter rejira, girazi faibha, vasiri dzakarukwa rejira, bepa, furo, donje, polypropylene, polyester, polyamides, zvinhu zvenaironi, PTFE, sox mutsinga dzinofamba nemukaka nezvimwe micheka mumaindasitiri.
Ona More Zvandakashanda Zvakaipa Laser
Tinoratidza kuti Flatbed CO2 Laser michina nokuda kwokuparadza firita jira
High Kasira, mukuru nemazvo uye zvikuru zvoga.
Rack uye pinion & kaviri Servo nemotokari inofamba hurongwa. Higher kunyatsoshanda uye isimbe.
Muenzaniso Economic pamusoro CO2 sandara mubhedha Laser hurongwa pamwe bhandi hutachiwana hurongwa.
CO2 Laser kucheka muchini hombe-youduku tefa zvinhu.
Golden Laser JMC Series High Speed ​​High nemazvo CO2 Flat Bed Laser Cutter muna Details
High nemazvo rack & pinion pakutyaira hurongwa. Nokuveza nokukurumidza kusvikira 1200m / s, kuti ACC kusvika 10000mm / s 2, kuchengetedza kwenguva refu hachichinji.
World-kirasi CO2 simbi RF Laser jenareta, yakatsiga uye hunogara.
Vacuum rokutora zinga conveyor kushanda tafura. Flat, automatic, pasi reflectivity kubva Laser danda.
Ingi jeti purinda
High kunyatsoshanda "ingi ndege aidhinda" pamwe achicheka panguva imwe chete.
1. Print denderedzwa 2. Kucheka mudenderedzwa
Zvakarurama kunetsa Kudya
Auto-feeder: kunetsa kururamiswa uye kudyisa pamwe Laser aricheke kuti kuramba zvokudya uye okurwadzisa.
Independent rezvedzidzo pfuma kodzero. The customized kuzvidzora hurongwa micheka mumaindasitiri.
YASKAWA Servo motokari
Japanese YASKAWA Servo motokari. High nemazvo, yakadzikama kumhanya, zadzisa okufunga.
Otomatiki Sorting System
Fully kwangoitwa Sorting hurongwa. Ita zvinhu dzichifura, achicheka, kufambira pane imwe nguva.
Kusarudza Golden Laser JMC DZAKATEVEDZANA CO2 Laser Cutting Machine
1. zvakarurama Makakatanwa dzichifura
No Makakatanwa feeder kuchaita nyore kuti vasataura musiyano iri zvokudya kwacho, zvichiguma kuti vanhuwo kururamiswa basa multiplier; Makakatanwa feeder munyika izere wakaiswa kumativi maviri mashoko panguva iyoyowo, pamwe vapiwa kudhonza jira kukurukura nokudzokorora chinotenderera, muitiro vose makakatanwa, ichava kururamiswa hwakakwana uye kudyisa zvakarurama.
2. High-nokukurumidza nokuveza
Rack uye pinion inofamba ezvinhu vakapakata mukuru-simba Laser chubhu, kunosvika 1200 mm / s nokuveza akurumidze, 8000 mm / s 2kumhanyisa nokukurumidza.
3. Automatic kufambira maitiro
Fully kwangoitwa Sorting hurongwa. Material kudyisa, nokuveza, kufambira pane imwe nguva.
4. Kushanda nzvimbo zvinogona customized
2300mm × 2300mm (90,5 padiki × 90,5 padiki), 2500mm × 3000mm (98.4in × 118in), 3000mm × 3000mm (118in × 118in), Kana uchida hako. Kudeuka vanoshanda munzvimbo zviri 3200mm × 12000mm (126in × 472.4in)
Watch Laser nokuveza muchini Sefa jira iri chiito!
Chii chinonzi mashoko ako?
Tine zvakakwana Laser kubudiswa michina, kusanganisira Laser nokuveza, Laser achiita zvokutemera, Laser perforating uye Laser chokuguma. Tine guru yakawanda Laser kwacho date kuwanda. Tinogona kuedza zvinhu zvako pamwe yedu Laser michina, uye optimize muitiro dziriko. Mimwe yokuedza video, kubudiswa parameters uye mamwe mashoko anoenderana anopiwa mahara.
Enda mharidzo maberere
Chii indasitiri rako?
Tave mutengi vaifarira, zvikuru kusora zvinodiwa indasitiri, ichipa digitaalinen Laser chikumbiro zvinogadzirisa, kusimudzira kuchinja uye upgrading tsika maindasitiri, uye kubatsira vanoshandisa innovate uye kukudziridza. Golden Laser rinobatanidzwa muminda chikumbiro zhinji, uye anoverengeka zvinogadzirisa vari kutungamirira pamwero iri indasitiri.
Enda indasitiri rokugadzirisa